South Africa: xasuuq ee kiiyoo ayaa sheegay in Peter Botha "Habka loo isticmaalo by Peter Botha iyo kooxdiisa takhaatiirta, kalkaaliyeyaasha, farmashiye, haweenka cad iyo nin cad oo ka dhan ah madow ee 80 sano"
Posted By: KongoLisolowaa: May 25, 2019 00: 30 No Comments
Saynisyahannadayda waxay ogaadeen hab, iyaga oo ku shubaya cabitaankooda shey ku habboon, taas oo suurtagal ka dhigaysa in lagu helo sun ku jirta dab yar iyo jeermis dhammaystiran. Iyagoo ka shaqaynaya cabitaanka iyo wax soo saarkooda, waxaan yarayn karnaa dadkooda.
Halgankayaga midnimada ayaa ku lug leh adeegsiga gabdhaha da'da yar ee cadaanka ah adeegsiga sunta disha tartiib tartiib. Dagaalkeenu maaha mid ku saabsan isticmaalka bamka atomiga ah si loo burburiyo nacaybka; waa inaynu intaa halkan u adeegsanaa sir-doonkeenna ujeedadaas. Waxay aad uga hufan tahay in qof loo qabto qalliinka qof ahaan.
Sida lagu sheego in madow dhiman markaad sariirta la seexan karto, waxaan leenahay fursad gaar ah. Our galmada calooshiis, soo socda, waxaa la socon doona Xarakada ah midab isku qarisa sidii ay dagan u sameeyaan howlgaladooda ay maamulka sun su'aasha iyo uur waxyeello oo ka mid ah haweenka madow oo ay noqon lahayd saaxiibo.
Waxaan dib u habeyneynaa ciyaartoyda, kalkaaliyeyaasha jinsiga iyagoo soo bandhigaya niman caddaan ah oo ku wajahan dumarka madow ee jilicsan. "Butros Botha, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Koonfur Afrika, oo ka soocaya hadalka uu qabtay August 18 1985 »
Sep29 02: 49